Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manitatra ny ezaka fanampiana any India ny United Airlines
United Airlines dia manitatra ny ezaka fanampiana an'i India amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fanangonana vola amin'ny Internet
United Airlines dia mandefa fanentanana fitadiavam-bola amin'ny Internet vaovao hanohanana ireo tratry ny krizy COVID-19 any India
United dia manambara ny fanombohana ny fanentanana fanangonana vola amin'ny Internet vaovao
United dia miara-miasa mivantana amin'ireo fikambanana mpiara-miasa aminy, ary koa miara-miasa amin'ireo mpitarika ny vondrom-piarahamonina
United dia manohana ireo iharan'ny krizy COVID-19 any India
ankehitriny, United Airlines nanitatra ny ezaka natao hanohanana ireo voakasiky ny krizy COVID-19 any India tamin'ny fanombohana ny fampielezan-kevitra fitadiavam-bola amin'ny Internet vaovao. Afaka manome ho an'ny mpiara-miombon'antoka fanampiana amin'ny zotram-piaramanidina ny mpanjifa: Airlink, Americares, GlobalGiving Foundation ary World Central Kitchen. United dia manome bonus maily 5 tapitrisa kilometatra hanentanana ny mpikambana ao amin'ny MileagePlus® hanohana an'ity ezaka ity ary hifanaraka amin'ny fanomezana tsirairay hatramin'ny vola mitentina 40,000 $. Ho fanampin'izay, United irery izao no kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana manompo an'i India, ary tao anatin'ny andro vitsivitsy izay dia nanampy tamin'ny fitaterana fanafody maherin'ny 300,000 kilao ho an'ny faritra.
"Nandritra ny areti-mandringana dia nanolo-tena hampiasa ny loharanon-karena sy ny fifandraisana izahay hanomezana fanampiana ireo vondrom-piarahamonina iharan'ny COVID-19 mafy indrindra," hoy i Luc Bondar, filoha lefitry ny varotra sy fahatokisana ary filohan'ny MileagePlus ao amin'ny United Airlines. "Miatrika io krizy io i India, ny mpanjifanay malala-tanana, ny mpiasa ary ny mpikambana ao amin'ny MileagePlus dia niroso mba hanontany ny fomba ahafahan'izy ireo manohana ireo sahirana, ary mirehareha sy manetry tena izahay hanamora ity asa mitsikera ity."
United dia miara-miasa mivantana amin'ireo fikambanana mpiara-miasa aminy, ary koa manao fiaraha-miasa amin'ireo mpitarika ny vondrom-piarahamonina mba hanampy ireo vondrom-piarahamonina voa. Ny faritra ifantohana ho an'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny kaompaniam-pitaterana dia:
Airlink: Fitaterana kojakoja ara-pitsaboana sy PPE
Amerika: Fanohanana ireo toeram-pitsaboana COVID-19, fanomezana fitaovana ara-pitsaboana tena ilaina, PPE ary kojakoja ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana ary fampianarana ny vondrom-piarahamonina momba ny fisorohana sy ny fanaovana vaksiny COVID-19
World Central Kitchen: Fitsinjarana sakafo mafana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny trano fisakafoanana eo an-toerana
Ankoatry ny ezaka fitadiavam-bola, United dia hanohy hampiasa ihany koa ny asany amin'ny fitaterana fitaovana fitsaboana tena ilain'ny faritra. Teo anelanelan'ny 28 aprily sy 2 mey, United dia niasa sidina 20 izay nitaterana fanafody 300,000 50 kilao mahery tany India. Anisan'izany ny fanomezana avy amin'ny US India Chamber of Commerce sy ny Chambre du Commerce-Indo-American any Houston izay nitondra rivotra miisa 2005 namakivaky ny USICOC Foundation ho an'ny Fikambanana Vokovoko Mena Indiana. United dia manohy mandrindra ny ezaka ataon'ny mpiasa amin'ny Airlink, mpiara-miasa aminy, izay manome fandrindrana ny tetika hanampiana amin'ny famakiana ireo sakana amin'ny famatsian-tsokosoko mba hanatanterahana valinteny haingana ny fanampiana fanampiana mahaolona. United dia nanompo tamim-pireharehana an'i India hatramin'ny 300 ary mampiasa olona mihoatra ny 15 ao amin'ny firenena. Ny sehatra fanaovana fampielezan-kevitra an-tserasera izao dia kasaina hatao ho an'ny fanomezana hatramin'ny XNUMX Jona. United dia hanohy hanombatombana ny fomba hanomezana fanampiana ho an'ny faritra.